Dowlada Somaaliya oo xirtay Cabdiraxman Cabdishakur
Ciidamo ka tirsan Nabad Sugidda Soomaaliya ayaa xalay xabsiga u taxaabay siyaasiga Cabdiraxman Cabdishakur Warsame.
Sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen VOA-da, ciidamada NISA ayaa weeraray guriga siyaasigan ka mid ah siyaasiyiinta xisbiyada mucaaraadka, halkaas oo la sheegay in is-rasaaseyn dhexmartay ciidamada amniga iyo ilaalada siyaasigani ay ku dhinteen shan ruux.
Afar ka mid ah dadka dhintay ayaa la xaqiijiyay in ay ahaayeen ciidamadi ilaalinayay Cabdiraxman Cabdishakur.
Xildhibaan Cabdifatah Geeseey oo ka mid ahaa dadki joogay guriga siyaasigan marki uu weerarka dhacayay, ayaa VOA-da u xaqiijiyay dhaawaca Cabdiraxman Cabdishakur.
Dhageyso xildhibaan ka goob joog ka ahaa weerarki xalay
Dhinaca kale war saxaagfadeed kasoo baxay Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa lagu faah-faahisiyay sida ay wax u dhaceen. Qoraalka
Qoraalka ayaa u dhignaa sidan:
Xariga siyaasigan ayaa imanaya saacado yar kadib marki uu shalay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Axmed Cali Dahir, ka dalbaday baarlamaanka Soomaaliya inuu xasaanada ka qaado laba xildhibaan oo lagu eedeeyay khiyaano qaran.